Wedzera iyo peji shandura mhedzisiro kumifananidzo yako nePeji Turn Mhedzisiro | Ndinobva mac
Zvekare isu tinotaura nezve chishandiso chatinogona kugadzirisa edu mafoto. Kunyange chiri chokwadi, izvo kuburikidza ne Photoshop isu tinogona kuita chero chinhu izvo zvinoitika kwatiri, kuitira kuti tidaro tinoda ruzivo rwakazara rwekushandisa uye zvakare, pazviitiko zvakawanda, yakakodzera plugin.
Imwe yemhedzisiro inokwezva yakanyanya kutarisirwa kana isu tichigadzirisa mapikicha kana isu tichigadzirisa mavhidhiyo mhedzisiro yekutendeuka peji, mariri imwe yemakona emifananidzo yakasimudzwa zvishoma. Kugona kuita izvi muFotohop, inoenderana plugin inodiwa kunze kwekunge isu tine ruzivo rwepamusoro-soro rwekushandisa.
Kana ruzivo rwedu rwakanaka kwazvo, uye nezvidzidzo zvakawanda zvatinoona paYouTube, hatigone kuwana nzira yekuwana mhedzisiro yatiri kutsvaga, muMac App Store yatinayo peji reKushandisa Mhedzisiro application, chishandiso chinongoita basa iri, icho ndiro, basa ratingaite kuti rienderane nezvatinoda nezvatinoda.
Peji Turn Mhedzisiro inotibvumidza isu kusarudza matatu mifananidzo, mifananidzo iyo ichava peji rekutanga, rekumashure uye rechipiri peji. Kana tangomisa kuti ndeipi mifananidzo mitatu iyo yatiri kuda kuve chikamu chechimiro, isu tinofanirwa kusimbisa kona yekutenderera. Tevere, isu tinofanirwa kumisikidza iyo yekuyera reshiyo (zvakanyanya kana zvishoma kusimbisa).
Pakupedzisira isu tinongofanirwa kusarudza mafomati ekuburitsa, chero PNG, JPEG, JPEG2000, TIFF, kana BMP. Tinogona zvakare kupurinda iyo mufananidzo zvakananga kubva kudhinda redu kana kuigovana kuburikidza nehukama hwepamhepo senge Twitter, Facebook, Flickr, Mail ...
Peji Turn Mhedzisiro yakatarwa pamadhora 9,99 euros pane Mac App Store. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mutengo hausi wakachipa, kune chinhu chinongoitika chega chatinogona kuchipa, ndechimwe cheakanakisa mafomu atinayo kugadzira iyi inoshamisa mhedzisiro mumifananidzo yedu.
Peji Tendeuka Mhedzisiro, inoda OX 10.11 uye yakagadzirirwa kutora mukana izere nema 64-bit processor. Inowanikwa muChirungu chete, kunyangwe mutauro wacho usingave dambudziko kana uchishanda nawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Wedzera iyo peji shandura mhedzisiro kumifananidzo yako nePeji Turn Mhedzisiro